Wasiirka Dastuurka Soomaaliya iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo Cadaado gaaray | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiirka Dastuurka Soomaaliya iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo Cadaado gaaray
Wasiirka Dastuurka Soomaaliya iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo Cadaado gaaray
Ujeedka socdaalka wasiirka dastuurka dowlada federaalka soomaaliya iyo wafdiga uu hogaaminayo ay kusoo gaareen magaalada Cadaado ayaa ah in Bulshadu talo ku yeeshaan dhameystirka arimaha dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya oo wasaaradu ay ku howlantahay.
C/raxmaan xoosh jabriil wasiirka dastuurka soomaaliya iyo warfidiisa garoonka diyaaradaha Cadaado waxaa kusoo dhaweeyay wasiirka galmuudg u qaabilsan arimaha datuurka iyo mas’uuliin kale.
Cismaan Maxmed Cali socdaal wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta galmudug oo hadalo soo dhaweyn u badan qeybta nasashada garoonka diyaarada wafdiga wasiir xoosh jabriil ugu jeediyay ayaa sheegay inay ka maamul ahaan ay soo dhaweynayaan wax kasta oo dan u ah qaranka soomaaliya.
Wasiirka dastuurka soomaaliya c/raxmaan xoosh jabriil oo xarunta madaxtooyada galmuudg kula kulmay ku simaha madaxweynaha ahna gudoomiye ku xigeenka labaad ee barlamanka galmudug iyo mas’uuliin ka tirsan labada gole ee maamulka ayaa sheegay in wasaaradu ay wado qorshe dib u eegista dastuurka looga tala gelinaayo bulshada rayidka iyo madaxda maamul goboleedyada si loo helo aragtiyo dhaxal gala.
Gudoomiye ku xigeenka labaad ee barlamanka galmudug ku simana u ah madaxweynaha maxamed axmed maalin ayaa sheegay inay kaalin ka qaadanayaan qorshaha dhameystirka dastuurka soomaaliya.
Previous articleRa’iisul Wasaare Khayre “Booqashada Kismaayo waxay muujinayaa midnimo iyo in dawladdu ay diyaar u tahay inuu la xisaabtamo shacabkeedu”
Next articleQarax Khasaaro gaystay oo ka dhacay Shiinka Dheer